HVM Analamanga : Manameloka ny fampihorohoroana -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM Analamanga : Manameloka ny fampihorohoroana
27/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny asa fampihorohoroana tamin’ny alalan’ny fanapoahana grenady nataon’olon-tsy fantatra tetsy amin’ny birao foiben’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) etsy Antanimena, ny alin’ny sabotsy 24 marsa teo, dia nanao fanambarana ny avy amin’ny HVM Analamanga notarihin’ny mpandrindra rezionaly, Ndranto Rakotonanahary, omaly.
Araka izany, dia manameloka ny zava-nitranga tamin’ny alalan’ny fanapoahana grenady ny avy amin’ny HVM Analamanga. Noho izay indrindra, nambaran’izy ireo fa tsy azo ekena velively ny asa fampihorohoroana tahaka ireny, indrindra fa nandratrana olon-tsotra iny tranga iny.
« Raha resaka politika ilay izy, dia tokony hatao anaty fifanajana tanteraka izany fa tsy amin’ny alalan’ny asa fampihorohoroana. Afaka mifampiresaka tsotra sy miady hevitra ny rehetra ao anaty fitoniana sy lavitry ny herisetra tanteraka”, hoy ny fanambarana.
Ankoatra izay, voalaza fa tsy ny asa fampihorohoroana mihitsy no hanakana ny tolona efa natomboky ny antoko HVM amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara sy ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka.
Noho izay, hoy izy ireo, dia hanenjika ary hanao izay ahafantarana izay tompon’antoka tamin’iny tranga nanimban-javatra sy naharatrana olona iny avy amin’ny HVM Analamanga. « Tsy handefitra amina heloka sy herisetra toa ireny ny eo anivon’ny antoko HVM. Tsy azo ekena velively ny fampihorohoroana sy ny herisetara atao amin’ny mpiara-belona”, hoy hatrany ny fanambarana.
Nomarihin’izy ireo mantsy fa efa eo am-pelatanan’ny polisy misahana ny ady heloka bevava ny raharaha amin’izao fotoana izao. Na izany aza anefa, dia mbola tsy nahitana soritra izany amin’izao fotoana izao, satria mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana misahana izany.
Ankoatra izay, nohamafisin’ny mpandrindra rezionalin’ny HVM Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, fa matoa ny birao foiben’ny antoko HVM nasionaly miaraka amin’ny birao foiben’ny HVM Analamanga no notorahana grenady, azo lazaina avy hatrany fa misy ambadika politika izany. Andrasana kosa ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana misahana ny raharaha.
“Raharaham-pirenena goavana ny ady amin’ny kolikoly ka manohana ny ezaka ataon’ny Bianco ny fitondram-panjakana. Mahakasika ny tetibola hampiasain’ny Bianco, hisy fiovana ny loharanon-ketra miaraka amin’ny fanohanana ara-tetibola amin’ny taona ho avy. Noho izany, manolo-tena aho ...Tohiny